Huawei Mate 8, बजार मा सबै भन्दा राम्रो phablet को विश्लेषण Androidsis
को स्पष्ट वृद्धि Huawei टेलिफोनी बजारमा। केही वर्ष पहिले एशियाई निर्माता सामसु and र एप्पलको साथ समात्न बाहिर निस्के र यदि यो दरमा जारी रह्यो भने त्यहाँ पुग्न लामो समय लाग्दैन। केही हप्ता पहिले मैले तिमीलाई देखाए Huawei P9 का साथ मेरो पहिलो प्रभावहरू, एक टर्मिनल जसले मलाई धेरै राम्रो भावनाहरू छोडिदियो र जसको म छिट्टै नै एक पूर्ण विश्लेषण प्रकाशित गर्नेछु। तर अब यो पालो को पालो हो Huawei मेट 8।
र यो यो हो कि लास भेगास Huawei को CES को अन्तिम संस्करण को समयमा एक6इन्च स्क्रीन संग एक phablet प्रस्तुत गरेर चकित। अब म तपाइँलाई एक ल्याउन Huawei मेट 8 समीक्षा, एक फोन जुन यसको गुणस्तर समाप्त हुन्छ र महान स्वायत्तताको लागि बाहिर खडा हुन्छ।
1 प्रीमियम समाप्त संग एक सतत डिजाइन
3 एक स्क्रिन जुन यसको आफ्नै प्रकाशसँग चम्किन्छ
4 Huawei मेट 8, एक अभूतपूर्व स्वायत्तता
5 एक उल्लेखनीय क्यामेरा
5.1 हुवावे मेट with सँग लिइएको तस्बिरहरूको उदाहरण
6 अन्तिम निष्कर्ष
8 पक्षमा अंक
9 बिन्दु बिरुद्द
9.2 Huawei मेट 8 को छवि गैलरी
प्रीमियम समाप्त संग एक सतत डिजाइन
म उसको बारेमा कुरा गरेर सुरु गर्छु Huawei मेट 8 डिजाइन। अवश्य पनि, पहिले म यो फोनको उत्कृष्ट अनबक्सिंगमा जोड दिन चाहन्छु। हुवावेले हरेक विवरणको ध्यान लिएको छ, एक प्रीमियम बक्सको साथ, फोन र केबलहरू बाहेक हामी प्रयोग गर्छौं, उच्च-गुणवत्ताको हेडफोन, एक स्क्रीन संरक्षक र एक कभर। मेरो टोपी यस सम्बन्धमा बन्द छ।
यदि को डिजाइन प्याकेजिको अन्तिम विवरणमा ध्यान दिइन्छ, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि फोन कार्यमा छ। र केटा यो काम माथि छ! डिजाईनले निर्माताको निरन्तरतालाई अनुसरण गर्दछ, जुन एक पहिचान योग्य डिजाइन भाषा प्राप्त गर्दैछ: म्याट inst तुरून्त एक Huawei को रूपमा मान्यता प्राप्त छ।
तपाईं त्यहाँ छ कि देख्नुहुनेछ डिजाइनको सर्तमा माते or वा म्याट एसको सन्दर्भमा केही भिन्नताहरू। ठिक छ, त्यहाँ मैले मनपराएको एक विवरण छ: Huawei Mate 8 को पछाडि गोलाकार लाइनहरूमा, अघिल्लो डिजाइनहरूलाई वेवास्ता गर्दै वर्गहरूमा आधारित ती तत्त्वहरूको साथ, र एक धेरै अनौंठो दृश्य प्रस्तुत गर्दै।
र यसको अन्त्य के हुन्छ। निर्माण सामग्री जसमा मेट of को शरीर काम गर्दछ, Sandblasted एल्युमिनियम र इस्पात, टर्मिनल एक अद्वितीय रूप दिन्छ। यी फिनिशहरू अन्य उपकरणहरूमा अभ्यस्त एन्टेनाका लागि असुविधाजनक प्लास्टिक लाइनहरू लुकाउँदै उपकरणमा फैलिएका छन्। मोर्चामा तिनीहरूले २.D डी प्रणाली पेश गरेका छन, निर्माताको नयाँ मोबाईलमा बढ्दो विस्तारका साथ यसले यस क्षेत्रमा वक्रता बनाउँछ। छेउमा पुग्ने स्क्रिनको।
म व्यक्तिगत रूपमा यस को स्थिति मनपर्दछ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर: मलाई अगाडिको भन्दा पछाडि आरामदायी लाग्यो जस्तो कि अन्य निर्माताहरूले शर्त लिएका छन्, यद्यपि यो प्रत्येक प्रयोगकर्ताको स्वादमा निर्भर गर्दछ।
दायाँ तर्फ हामी भोल्युम नियन्त्रण कुञ्जीहरू बाहेक टर्मिनलको अन / अफ बटन फेला पार्नेछौं। यसको निर्माण ठोस छ, फोनका अनुसार, एक धेरै रमाईलो स्पर्श प्रदान गर्दै छ र पावर बटनमा त्यो हल्का मोटापनले हामीलाई कुन बटन थिचेको छ त्यसमा नहेरी भिन्न देखिन मद्दत गर्दछ। सधैं जस्तो, Huawei ले सबै विवरणहरूको ख्याल राख्दै।
व्यक्तिगत रूपमा, म फोनमा फिनिसको बारेमा साँच्चिकै ध्यान गर्दछु र Huawei नयाँ phablet को मामला मा सनसनी उत्कृष्ट छ। तपाइँ निर्माणकर्ताले गरेको महान काम देख्न सक्नुहुनेछ, जसले प्रस्तुत गरेको छ उदात्त समाप्त संग टेलिफोन र यो सम्बन्धित छ उच्च दायरा को उचाई मा।
Su हात भावना उत्कृष्ट छ र यसको मेटलिक समाप्त भएता पनि, फोन सजिलै चिप्लिदैन। यद्यपि एक सुरक्षात्मक मामला आयो, मैले फोन बिना नै प्रयोग गर्न मन पर्यो, यस सन्दर्भमा थप वस्तुगत विश्लेषण दिन र भावनाहरू धेरै सकारात्मक भएका थिए: फोन मेरो हातबाट फिसलिरहेको छ भनेर मलाई कहिले पनि महसुस भएको छैन। र मेरिटको अंश यसको आयामहरूमा निहित छ।
किनभने यस पक्षमा Huawei यो कढ़ाई गरिएको छ। हामी छ इंचको पर्दाको साथ फोनको सामना गरिरहेका छौं तर यो यो हातमा देखिदैन। र के यो Huawei फोन को चार पक्षहरु मा न्यूनतम फ्रेमहरु को निर्माण गर्न को लागी प्रबंधित गरीएको छ, एक धेरै निहित मोटाई को अनुमति संग यसको ठूलो स्क्रीन को बावजुद, फोन धेरै रमाईलो र प्रयोग गर्न सजिलो छ। अर्को उल्लेखनीय बिन्दु टर्मिनलको हल्कासँग आउँदछ, यसको आकार अनुसार: १ 185 XNUMX ग्राम।
आयामहरू 157.1 x 80.6 x 7.9 मिमी
स्क्रिन -इन्च IPS-Neo LCD6× 1920 पिक्सेल (1080 367dpi) र Cनिंग गोरिल्ला ग्लास layer तह
प्रोसेसर आठ-कोर HiSilicon किरिन 950 72० (चार २.2.3 GHz कर्टेक्स- A53 र चार १.1.8GHz कर्टेक्स AXNUMX)
राम GB जीबी वा GB जीबी प्रकार LPDDR3 मोडेलमा निर्भर रहन्छ
आन्तरिक भण्डारण Or२ वा GB 32 जीबी विस्तार हुन सक्ने माइक्रोएसडी मार्फत १२64 जीबी सम्म मोडलमा निर्भर गर्दछ
रियर क्यामेरा १ / मेगापिक्सल एफ / २.२ २ m एमएम / ओआईएस / अटोफोकस / अनुहार पहिचान / दृश्य / HDR / डुअल एलईडी फ्ल्यास / जियोलोकेशन / p०p भिडियो रेकर्डि 16 2.0०fps मा
कनेक्टिविटी डुअलसिम वाई-फाई 802.11०२.११ ए / बी / जी / एन / डुअल ब्यान्ड / वाइफाइ प्रत्यक्ष / हटस्पट / ब्लुटुथ /.० / एफएम रेडियो / ए-जीपीएस / ग्लोनास / बीडीएस / जीएसएम 4.0० / 850०० / १900०० / १ 1800 ०००; Band जी ब्यान्ड (HSDPA1900 / 3० / 800०० / १850०० (AWS) / १ 900 ०० / २१०० - NXT-L1700 NXT-L1900) 2100 जी ब्यान्ड (१ (२१००) २ (१ 29 ०००) ((१09००) ((१4०० / २१००) ((1०) (() ००) ((२2100००) (() ००) १२ (2००) १ ((1900००) १ (()००) १ (()००) २० ()००) २ ((3०) (1800 (२4००) ((१ 1700 ००) (० (२2100००) - NXT -L5) / HSPA गति .850२.२ /6M MBS र LTE Cat900 7/2600 Mbps
ब्याट्री ,4.000,००० mAh गैर-हटाउन योग्य
मूल्य अमेजन मार्फतe520 यूरो
तपाइँलाई पहिले नै थाहा छ कि एशियाई फर्मले आफ्नै चिपसेटहरू विकास गर्दछ र Huawei मेट they को लागि उनीहरू शक्तिशालीमा बेट गर्दछन्। किरीन 950० SoC, एक प्रोसेसर HiSilicon द्वारा डिजाइन, Huawei समूह को सम्बन्धित र उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्ताव।
Huawei Mate S मा देखाएको किरिन 935 like जस्ता प्रोसेसरहरू छोटो बिन्दुमा वा सम्मान7यो ग्राफिक्स सेक्सनको साथ आयो, GPU हरूलाई पुरानो एकीकृत गरेर। तर किरिन 950 .० को लागी यस्तो देखिन्छ कि यो समस्या समाधान भएको छ।
र यो Huawei मा शर्त छ कि छ शक्तिशाली एआरएम माली- T880 GPU तपाईंको MP4 सेटिंग्सको साथ। अघिल्लो भन्दा धेरै राम्रो ग्राफिक्स एकाई र त्यो, जब Huawei मेट 8 को पूर्ण HD स्क्रीन संग सम्बन्धित छ, उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। तपाईं भिडियो समीक्षामा हेर्न सक्नुहुन्छ, म धेरै संख्यामा खेलहरू हेर्न सक्षम भएँ र म यस सन्दर्भमा कुनै समस्याहरू भएन।
को खेलहरू सहज र तरल पदार्थमा चल्दछन्, तपाईंलाई कुनै समस्या बिना मजा लिन अनुमति दिदै। किनभने पनि Huawei मेट 8 गहन प्रयोग पछि अधिक गरम छैन। दिमागमा राख्नको लागि अर्को विवरण।
र यसको कर्टेक्स- A73 कोरलाई धन्यवाद छ कि उत्कृष्ट उपभोग र तताउने, गहन प्रयोग पछि फोन तातो हुने छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुको साथसाथै, म तपाईंलाई पहिले नै भन्दछु कि Huawei Mate 8 को केही समयको लागि डोरी छ। यसको ब्याट्री यस फोनको एक शक्ति हो। तर पहिले म तपाइँको स्क्रिनको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु।
एक स्क्रिन जुन यसको आफ्नै प्रकाशसँग चम्किन्छ
दायरा जीवनसाथी यो सँधै धेरै ठूला स्क्रीनहरूको साथ फोनहरू प्रस्ताव गर्न बाहिर आयो र यस शर्तमा यसको फाइदा र बेफाइदा छ। सुरू गर्नका लागि, यी आयामहरूको साथ एक उत्तम स्क्रिन सिर्जना गर्न असम्भव छ, वा कम से कम उचित मूल्यको साथ।
यो मुख्य कारण हो किन Huawei को लागी एक को छनौट भयो पूर्ण HD रेजोलुसन प्राप्त गर्ने LCD प्यानल। पहिलो अफवाहहरूले सुझाव दिए कि Huawei Mate 8 को Nexus 6P जस्ता QHD प्यानल वा Mate S जस्ता AMOLED प्यानल हुनेछ, तर केहि सत्यबाट अर्को छैन।
अन्तमा Huawei Mate 8 उस्तै सुविधाहरुको प्यानलको लागि अप्ट्स गर्दछ जुन यसको पूर्ववर्तीमा यति राम्रोसँग काम गर्‍यो। मैले एक राम्रो रिजोलुसनको साथ OLED स्क्रिन वा LCD हेर्न मन पराउँथ्यो, यद्यपि वास्तविकताको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो र स्वायत्तता उल्लेखनीय रूपमा कम भएको थियो।
कागजमा यो स्पष्ट छ कि पिक्सेल घनत्व सबै भन्दा राम्रो होईन, विशेष गरी यदि हामी यसलाई सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस with को स्क्रिनसँग तुलना गर्छौं, यद्यपि मैले तपाईंलाई पहिले नै बताइसकेको छु कि त्यस मूल्यका लागि तपाईले Huawei भन्दा राम्रो स्क्रिनको साथ फोन भेट्टाउनु हुन्न। मेट A. र बाहिर हेर्नुहोस्, के हुवावे मेट 8 को स्क्रिन खराब छैन। तर यो बजार मा मात्र राम्रो छैन।
हुवावे मेट 8 स्क्रीनमा विवरणहरूको बारेमा कुरा गरौं: तपाईंको सुरू गर्न प्यानल आईपीएस - NEO प्रकार हो, तथाकथित JDI स्क्रीनहरू। म्याट on मा उस्तै स्क्रिन, यद्यपि केहि विवरणहरू सुधार गरिएको छ, अघिल्लो मोडेलको हरियो टोन फिक्स गर्दै र ब्राइटनेसलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउँदै (7 490 ० नाइट्स, 522२२ सीडी / एम² माथि)।
यो चिनो अनुवाद गर्दछ उज्यालो प्रदर्शन जुन कुनै समस्या बिना देख्न सकिन्छ बाहिर। थप रूपमा, न्यूनतममा चमक कम गरेर तपाईं आफ्नो आँखा चिन्ता बिना पूर्ण अन्धकारमा समस्या बिना पढ्न सक्नुहुन्छ।
को रंगहरू तीखा र जीवन्त छन्, उत्कृष्ट स्पष्टता प्रस्तुत गर्दै। थप रूपमा, हुवावे सफ्टवेयरले तपाइँलाई प्रत्येक उपयोगकर्ताको स्वाद अनुसार रंग तापमान समायोजित गर्न अनुमति दिन्छ। संक्षेप मा, एक धेरै पूरा पर्दा जुन अपेक्षा भन्दा बढी भेटिन्छ, तर AMOLED स्क्रिनको उत्कृष्टतामा पुग्न बिना। जे होस् यसको स्वायत्तता देख्दै पनि, म IPS प्यानल मन पर्छ।
Huawei मेट 8, एक अभूतपूर्व स्वायत्तता
ब्याट्री सामान्यतया माटे परिवारको महान शक्ति हो र Huawei phablet रेखा को नयाँ सदस्य को मामला मा यो एक अपवाद हुन गइरहेको थियो। कागजमा हामी एक पाउँछौं 4.000००० mAh ब्याट्री जसले यसको स्क्रिनको पिक्सेल र किरीन 950 .० हार्डवेयरको साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन र स्वायत्तता प्रदान गर्छ। र त्यसो भएको छ।
स्वायत्तताले तपाईंलाई निराश पार्दै छ, पटक्कै होइन। यद्यपि यो सत्य हो कि यो हटाउन योग्य छैन, तर तपाईसँग पावरब्याक बोक्ने चिन्ता लिनु पर्दैन। र त्यो हो प्रयोगको एक दिन पछि, Huawei मेट 8 उपभोक्ता हुन आधा ब्याट्री प्रतीक्षा थियो। हामी एक पारम्परिक प्रयोगको बारेमा कुरा गर्दैछौं।
म ब्याट्री निचोल्छु अधिकतम दुई दिनको घण्टा चलाउन र हुवावे मेट ate लाई
म डेढ दिनसम्म बसेँ। प्रभावशाली धेरै himण उनको मा जान्छ Android .6.0.० र भावना UI ,.०, वास्तवमै पूर्ण ड्रम इशाराको साथ।
प्रणालीले तपाईंलाई भन्दछ कि कुन अनुप्रयोगले खाता भन्दा बढी मेमोरी प्रयोग गरिरहेको छ, तिनीहरूलाई स्वायत्तता विस्तार गर्न बन्द गर्न सिफारिस गर्दै, उत्कृष्ट स्रोत अप्टिमाइजेसन प्राप्त गर्दै। यदि यसमा हामी यसको द्रुत चार्ज प्रणाली थप्दछौं तपाईंलाई 37० मिनेटमा% 30% टर्मिनल चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ र एक घण्टा मा एक पूर्ण चार्ज, हामी मार्केट मा सबै भन्दा राम्रो स्वायत्तता संग हामीसंग एक फोन छ। यस सन्दर्भमा हुआवेका लागि १०।
एक उल्लेखनीय क्यामेरा
La हुआवे मेट camera क्यामेरा यो कुनै पनि खराब होइन। सोनी सेन्सर द्वारा गठन गरिएको यसको मुख्य लेन्स IMX298 अप्टिक्स स्थिरीकरण, चरण पत्ता लगाउने फोकस र डुअल टोन एलईडी फ्ल्यासको साथ १ me मेगापिक्सेल धेरै राम्रो प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
सेन्सरले बायर आरजीबीजी पिक्सेल सेटअपको साथ वास्तवमै राम्रोसँग काम गर्दछ जसले सबै प्रकारका परिदृश्यहरूमा साँच्चै राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। को २ mill मिलिमिटर लेन्सf/ 27 अपर्चरको साथ राम्रो कब्जा को वातावरण को रूप मा जस्तै सधैं उत्कृष्ट कब्जा प्रदान गर्दछ।
एक पटक शक्ति बाहिर जान्छ, तस्विरहरूको गुणस्तर अन्य क्यामेरा जस्तै सैमसंग वा एप्पलको तुलनामा थोरै खस्दछ, यद्यपि हामीले मूल्य सीमा सम्झनु पर्छ जुन हुवावे मेट we ले सार्दछ।
जे भए पनि, क्याप्चर गरिएका छविहरू, जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ र यसको सफ्टवेयरको सरलताले हामीलाई तस्विरहरू सजिलै र सरल रूपमा लिन सक्दछ। के तपाइँ फोटोग्राफी प्रेमी हुनुहुन्छ र यसको सबै पक्षहरू नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? उसलाई राम्रो संग व्यावसायिक मोड, जुन तपाईं आईएसओ वा जोखिम को रूप मा कुनै पनि मान छुन सक्नुहुनेछ, तपाईं फोटो खिच्ने बच्चाहरूको जस्तै रमाउनुहुनेछ।
भिडियो खण्ड एच पछि अर्को कमजोर पोइन्ट होuawei Mate 8 ले तपाईंलाई प्रति सेकेन्ड images० छविमा अधिकतम १p०p रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ (M 47MBps), अन्य मोडेलहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको KK बाट टाढा। व्यक्तिगत रूपमा, म बर्षदेखि K के भिडियो को फाइदा लिन गइरहेको छैन, तर ती प्रयोक्ताहरु जसले यो प्रविधि प्रयोग गर्छन्, यो ध्यानमा लिनको लागि विस्तृत छ।
अन्तमा, तपाइँको Me मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा योसँग सोनी IMX179 सेन्सर छ जसले सेल्फी र भिडियो कलहरूलाई मन पराउने छ, क्वालिटी कैप्चर गर्दै, जबसम्म हामी उज्ज्वल क्षेत्रमा छौं।
हुवावे मेट with सँग लिइएको तस्बिरहरूको उदाहरण
Huawei एक बनाएको छ Huawei मेट 8 को साथ उत्कृष्ट काम, एक फोन जुन तपाईं 550० भन्दा कम युरोमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ र सुविधाहरू, फिनिश र स्वायत्तताका साथ जुन तपाईंलाई निराश पार्दैन।
एशियाई निर्माता केहि बर्षमा साबित भइरहेको छ कि यसले सेक्टरको अनुहार आमने सामने सामना गर्न सक्छ र यो फोन यसको एक नयाँ उदाहरण हो। हुवावे टेलिफोनी बजारको अर्को मालिक हुनेछ? यदि तिनीहरू यस दरमा जारी रहन्छन्, र म तपाईंलाई भन्छु कि Huawei P9 विश्लेषण आश्चर्यचकित हुनेछ, मैले पहिले नै अनुमान लगाए कि Huawei ले धेरै कुरा गर्न लागिरहेको छ।
तपाइँ एक शक्तिशाली phablet को खोजी रहेको छ कि तपाइँ एक उचित मूल्य मा कुनै पनि मल्टिमेडिया सामग्री को मजा लिन को लागी अनुमति दिन्छ, हुवावे मेट the विचार गर्नका लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो।
फोनको प्रीमियम समाप्त प्रभावशाली छन्
यसको स्वायत्तता अतुलनीय छ: दुई दिन धेरै समस्या बिना
पैसाको लागि मूल्यको हिसाबले सब भन्दा राम्रो उच्च-अन्तका phablet
यसको स्क्रिन केही निष्पक्ष रहन्छ यदि हामी यसलाई अन्य QHD प्यानलहरूसँग तुलना गर्छौं भने
Huawei मेट 8 को छवि गैलरी
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » समीक्षा » Huawei मेट 8, विश्लेषण र राय
क्वालिटी / मूल्य Xiaomi Redmi नोट3प्रो भन्दा बढी छ…। यो आधा लायक छ र ईर्ष्या गर्न केहि छैन; कुनै ब्याट्री छैन, कुनै स्क्रिनको गुणवत्ता छैन, फिंगरप्रिन्ट रिडर छैन ... ... क्यामेरा वरपर नै हुनेछ, र SD 650० जनावर हो (माथिल्लो-मध्य दायराको)। यसबाहेक, मिउइ लेयरले शुद्ध एन्ड्रोइड भन्दा बढी जोडी 6.0.० को साथ आउँछ। )…। रेडमीलाई उछिन्ने एक मात्र चीज फिनिशमा छ, र धेरैले होइन। रेडमी स्पेनिश ग्यारेन्टीको साथ २ e० ई मा स्पेनमा उपलब्ध छ।
उत्तम Phabet अझै पनि RMN3प्रो हो, कम्तिमा गुणवत्ता / मूल्यमा।
यो टर्मिनल महँगो छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट अगस्टको बीचमा जारी हुनेछ